Réponses pour «vehivavy»:
15 2B - Tsy tazana loatra ny vehivavy na tsy hita taratra ny p.
Ny Baiboly - ( Tenin'Andriamanitra ) 65%
22 Ary ny taolan-tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dralehilahy.
Gazety fevrier 2019 64%
« Toy ny vehivavy, ny lehilahy, ny mpanompo, ny loholona, ny olona rehetra, hitantsika ao amin’ny toko.
FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY PENIELA 61%
Tarika JENERALY en Audio 61%
-DADA MALALA -18 TAONA -NY TOAKA -NA DIA IZANY AZA -IREO OLONA IREO -FRERES JACQUES -ISIKA ROA -DADABENAY -MANGATA-BADY -ZANY VEHIVAVY IZANY
LESONA 3 58%
LESONA 9 57%
NY TENY ARABO َ‫اَ ْﻧت‬ Mariho tsara fa miafara amin’ny zanatsoratra « a » ho an’ny lehilahy ary miafara amin’ny zanatsoratra « i » ho an’ny vehivavy.
LESONA 4 51%
‫إِ ْسم اإلِ ْب ِن َن ِب ْيل‬ ( Ismoul ibni nabyiloun ) Ny anaran’ilay NIHAADou Saingy ny anaran’ireo vehivavy kosa jereo tsara fa tsy manaraka an’izany fitsipika izany fa miafara amin’ny zanatsoratra tokana ihany.
LESONA 10 50%
Samy nanana ny trano fandriany avy ny lehilahy sy ny vehivavy.
ZIONA VAOVAO TANTARA 35%
Article GBUT 2014 33%
AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf 32%
Ampahatsiahivin’ny Papa fa raha nahary ny olona ho lehilahy sy vehivavy Andriamanitra, ka nitsodrano an’i Adama sy Eva hitombo dia niteraka an’i Kaina sy i Abela izy ireo;
Article GBUT n°02 2014 31%
I Eva koa tamin’io dia efa vehivavy vonona tsara tamin’ny fanambadiana fa tsy mbola zazakely tsy akory.